ဖရန်စစ် နန်နူကို အနိုင်ရယူပြီး ချန်ပီယံဆု ပြန်လည်ရယူခဲ့တဲ့ မီအိုစစ် - Fox Sports Myanmar
ဖရန်စစ် နန်နူကို အနိုင်ရယူပြီး ချန်ပီယံဆု ပြန်လည်ရယူခဲ့တဲ့ မီအိုစစ်
ဘော်စတွန်မှာ ရှိတဲ့ TD Garden မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ UFC ပွဲစဉ် ၂၂၀ မြောက်မှာတော့ စတိပ် မီအိုစစ်က ဖရန်စစ် နန်နူကို အနိုင်ရရှိပြီး ဟဲဗီးလ်ဝိတ် ချန်ပီယံဆုကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့် UFC ဟဲဗီးလ်ဝိတ် လောကမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ကစားသမားအဖြစ် မီအိုစစ် ရပ်တည် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(MMA ၁၈ ပွဲနိုင် ၂ပွဲရှုံး – UFC ၁၂ ပွဲနိုင် ၂ ပွဲရှုံး) ရလဒ် ရယူထားနိုင်တဲ့ မီအိုစစ် နဲ့ (MMA ၁၁ပွဲနိုင် ၂ ပွဲရှုံး – UFC ၆ ပွဲနိုင် ၁ ပွဲရှုံး) ရလဒ် ထွက်ပေါ်ထားတဲ့ နန်နူတို့ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ပထမအချီတည်းက မီအိုစစ်ကပဲ ပွဲကိုစိုးမိုးခဲ့ပါတယ်။
#ANDSTILL@stipemiocicufc IS THE BADDEST MAN ON THE PLANET! #UFC220 pic.twitter.com/09Jgr9FlNm
ပွဲအပြီးမှာ ဒိုင် ၃ ဦးရဲ့ ရမှတ်စုစုပေါင်း ၅၀ မှတ် ၄၄ မှတ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာက မီအိုစစ်အတွက် တတိယမြောက် ဟဲဗီးလ်ဝိတ် ချန်ပီယံဆုကို ရရှိစေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဟဲဗီးဝိတ်တန်းမှာတော့ ပထမဆုံး ၃ ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်တဲ ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ပွဲစဉ်တစ်ပွဲမှာတော့ ဒန်နီရယ် ကော်မီယာက ဗော့ကန် အော့ဇ်ဒီမီယာ ကို အနိုင်ရရှိပြီး lightweight တန်း ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲအစမှာ ပဲ အော့ဇ်ဒီမီယာက တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် ကော်မီယာ ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဘယ်လက်သီးနဲ့ ထိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရာမှာတော့ ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ကော်မီယာရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုကို ခံခဲ့ရပြီး ဒိုင်ပွဲရပ်ခဲ့လို့သာ သက်သာ ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယအချိနဲ့တင် အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။
Hands up if you’re ready for another title fight. ✋ #UFC220 pic.twitter.com/77wIT1MjrJ
ကော်မီယာက အော့ဇ်ဒီမီယာ ရဲ့ အပေါ်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီး ဒိုင်ပွဲမရပ်ခင်ထိ ကော်မီယာရဲ့ ထိုးချက်တွေကို တရစပ်ခံစားခဲ့ပါတယ်။
UFC ပွဲစဉ် ၂၂၀ ရဲ့ ပွဲစဉ်များနဲ့ ရလဒ်များကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Home Combat Sports ဖရန်စစ် နန်နူကို အနိုင်ရယူပြီး ချန်ပီယံဆု ပြန်လည်ရယူခဲ့တဲ့ မီအိုစစ်